लेखन चिसिएन, यो अभ्यास मात्र आवश्यक छ Martech Zone
शुक्रबार, जुलाई 5, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको श्रीमती, वेंडी रसल, एक टेलिभिजन निर्माता र लेखक हो। उनले HGTV मा सफल शृंखला होस्ट गरिन् जसलाई She's Crafty भनिन्छ। हामी करीव २० बर्षदेखि राम्रा साथीहरू भएका छौं र म उनको रचनात्मक प्रतिभाको बर्षा भएको छु र वर्षौंको लागि ड्राइभ गरिरहेछु।
व्यक्तिगत रूपमा, म आफैलाई एक रचनात्मक न त लेखकको रूपमा सोच्दिन। तर हरेक दिन म आफैलाई अद्वितीय समाधानको साथ आउँदछु र ब्लग पोष्ट लेख्न समय लिन्छु। मँ एक प्रकाशित लेखक हुँ, म अझै आफूलाई एक लेखकको रूपमा लाग्दिन। हुनसक्छ यो मेरो गलत हिज्जे र व्याकरण त्रुटि हो जसले मेरो सोचलाई ड्राइभ गर्छ।
लगभग हरेक दिन, म यो विज्ञापन फेसबुकमा चल्दै गरेको देख्छु र हरेक चोटि मैले यो देख्दा त्रास पाउँदछु।
मलाई लाग्दैन लेखन बेकार छ, न त म विश्वास गर्दछु लेख्न गाह्रो छ। मैले पछिल्लो दशकमा सिकेका कुरा के हो भने लेखनको लागि समर्पण र अभ्यास चाहिन्छ।
म धेरै गतिविधिहरूमा उत्प्रेरित छैन - तर लेखन भनेको ती चीजहरू मध्ये एक हो जसले मलाई राती राख्छ। जब मसँग एक ब्लग पोष्ट छैन, म शाब्दिक मेरो अन्य प्राथमिकताहरु मा ध्यान केन्द्रित एक कठिन समय छ। धेरै चोटि, म पूरै दिन धेरै पोष्टहरूमा काम गर्नेछु ताकि म केहि दिनहरूमा अन्य कामहरूमा ध्यान दिन सक्दछु।
Wendy is एक लेखक, त्यसैले मैले उनलाई कहिले काहिं लेख्न कति गाह्रो भयो भनेर सोधें। उनी भन्छिन् कि यो पुस्तक पढे सम्म यो गाह्रो हुन्थ्यो कलाकारको तरिका। वेंडीले भने कि जुलिया क्यामरुनको पुस्तकले उनको लेखनमा र उनको क्यारियरमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यति धेरै कि, बर्ष पछि, वेंडीले सुश्री क्यामरनसँग एक कार्यशाला लिई र व्यक्तिगत रूपमा उनलाई धन्यवाद दिइन्।
अमेजन: सृजनात्मक अभिव्यक्ति जीवनको प्राकृतिक दिशा हो भन्ने आधारभूत सिद्धान्तको साथ, जुलिया क्यामरन र मार्क ब्रायनले तपाईको सृजनात्मकतालाई विभिन्न ब्लकबाट पुन: प्राप्त गर्न व्यापक बाह्र हप्ताको कार्यक्रम मार्फत नेतृत्व गर्दछन्, सीमित विश्वास, भय, आत्म-तोडफोड, ईर्ष्या सहित। , दोषी, लत र अन्य अवरोध गर्ने शक्तिहरू, कलात्मक विश्वास र उत्पादकत्वको साथ तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन।
जुलिया क्यामरून विश्वास गर्दछन कि सबैजना रचनात्मक छन् र सबै जनासँग लेख्ने क्षमता छ। एक दशकको लेखन पछि, म पनि त्यस्तै विश्वास गर्दछु। लेख्न गाह्रो छैन अरु केहि। र लेखन चूसदैन। यदि तपाइँ एक महान मार्केटर हुन आशा गर्नुहुन्छ भने, म विश्वास गर्दछु कि तपाइँ एक महान लेखक हुनु आवश्यक छ। हुनसक्छ कलाकारको तरीका तपाईका लागि प्रोग्राम हो (त्यो मेरो सम्बद्ध लिंक समावेश छ)!
भाइरल सामग्रीको E तत्वहरू
याप तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ म तपाईंसँग सहमत छु !!
म तपाईसंग सहमत हुन सक्दिन मैले मेरो जीवनमा धेरै गरें। अर्केस्ट्रेसन र संरचना, दृश्य कला, कविता, व्यवस्थापन, र गद्य लेखन मेरो लागि सबैभन्दा गाह्रो चीज भएको छ। मुख्य कारणहरू मध्ये एक भनेको तपाईं सम्पादक वा साथी लेखकहरूसँग काम गर्नु हो जहाँ तपाईंको शब्दहरू राम्रोसँग, सम्पादित, मौलिकता सम्पादनमा अलग हुन्छ।
मैले longer०० भन्दा बढी शब्दहरू टाढाको लागि लेखें र धेरै स .्द्रताका साथ मैले संगीत, कविता वा दृश्य कला दाँया प्राप्त गर्न भन्दा बढी नै गरें। र मैले लेखकको रूपमा धेरै प्रशिक्षण पाएको छु, ए हुन सक्छ यो समस्या हो।
सही लेख्ने काम गर्नु मेरो जीवनको सबैभन्दा गाह्रो चीज हो।
मार्स 21, 2017 मा 2: 59 एएम
मलाई रब केनेडीले जे भने पनि वास्ता गर्दिन, म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु। किनभने पुस्तक पढे बिना नै ज्ञान जम्मा गर्न र एक राम्रो लेखक बन्न सम्भव छैन। तपाईको आदर्श पोष्टको लागि धन्यबाद